नेपाली शहीदका वास्तविकता – अर्को पाटो – SHARE KNOWLEDGE
October 23, 2016 Siddiq Thoughts 0
शहीद कसलाई भनिन्छ? यसको उत्तर सामान्यतया सबैलाई थाहा छ। हो, शहीद त्यो व्यक्ति हो जो आफ्नो विश्वासको खातिर मारिएको हुन्छ। राजनितिमा शहीद त्यो हो जो आफ्नो विचारकोलागि मारिएको हुन्छ। आम मानिसको बुझाईमा शहीद त्यो व्यक्ति हो जो साधारण जनताहरुको मुक्तिको लागि, जनताको अधिकारको लागि भएको आन्दोलनमा मारिएको हुन्छ जसमा उसको आफ्नो निजि स्वार्थभन्दा पनि जनताको मुक्ति र अधिकारले विशेष महत्त्व राखेको हुन्छ। यो हामीले बुझेको कुरा हो तर हामीलाई बुझाइएको शहीदको व्याख्या फेरि फरक छ। हामीलाई झट्ट कसैले सोध्यो कि नेपालका शहीदहरुको बारेमा भन्नुस् अनि हाम्रो दिमागमा यही तलको फोटोमा भएका व्यक्तिहरुको अनुहार हाम्रो आँखा अगाडि झुल्किन्छन्। शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र गँगालालका तस्वीर सामुन्ने आउन्छन्।
हामीलाई ईतिहासमा पढाइयो कि २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो रे! त्यो प्रजातन्त्रको विशेषता के थियो भने राज्यसत्ता राणाहरुको हातबाट राजाको हातमा आएको थियो। जनताको हातमा के आयो त? भनेर मेरो नजरले निहार्दा “राणाको गुलामीबाट मुक्ति अनि राजाको गुलामी”। त्यसैले होला ‘प्रजा’ यानि कि ‘दास’ को तन्त्र। २००७ सालले जनतालाई दिएको यही हो – एउटा मालिकबाट छुटकारा अनि अर्को मालिक को गुलामी। त्यस बखत सत्ता परिवर्तन भएकै थियो तर सत्ता जनताको हातमा त आएको थिएन। यी चारजना जस्ता कैयौँ मारिएका होलान् तर के त्यो जनताको मुक्तिका लागि मारिएका हुन् त? के जनताको मुक्ति र अधिकार कुनै राजाको गुलामीमा निहित हुन्छ? प्रश्न गम्भिर छ, र यसको उत्तर पनि। मेरो नजरमा शहीद त्यो हो जसले जनताको सानो अधिकारको लागि किन नहोस् यदि त्यो पाउनका लागि भएको सँघर्षमा मारियो भने ऊ शहिद हो।
मेरो विचारमा शहीदको एउटा हैसियत हुन्छ र त्यो जो कसैलाई पनि दिन सकिन्न। शहीद एउटा यस्तो महान स्तर हो जसको गुणस्तर खस्काउने अधिकार कसैलाई हुनुहुन्न। शहीद सदा-सर्वदा अजय हो। मेरो नजरमा कुनै एउटा एकल परिवारको हालि-मुहालिका लागि मारिएका व्यक्तिहरु शहीद कहलाउने हैसियत राख्दैनन्। शहीद सबैका साझा हुन्छन्।
position of king and position of martyrs in Nepal
विश्वमा शहीदका विभिन्न स्मारकहरु छन् तर हाम्रो नेपालमा भएको स्मारक जस्तो शायद विश्वमा कतै छैन। हामी प्राय:ले हेरेका छौँ, शहीद गेटको शहीद स्मारक। चारजना शहीदहरुको मुर्ती तल राखिएको छ र शहीद नै नभएका राजाको मुर्ति दुइ गुणाले माथिको स्थानमा राखिएको छ श्रीपेच सहित। यसले के ईँगित गर्छ? सीधा छ, राजाको हैसियत शहीदकोभन्दा माथि छ। के यो हुनु तपाइँको नजरमा सही छ? के शहीदको स्तर राजाको भन्दा तलको स्तरको हो? मेरो नजरमा यो सरासर शहीदहरुको अपमान हो। तर यथार्थ हेर्ने हो भने यो सही पनि छ। वास्तवमा ती चारजना जनताका मुक्ति र अधिकारका लागि भन्दा पनि राजाको अधिकार स्थापित गर्न नै लागि परेका थिए। हामीलाई चाहे जेसुकै रटाइएको होस्। हामी अब बुझ्ने भइसक्यौँ, हामीमा विश्लेषण गर्ने क्षमता छ, त्यसैले म भन्न सक्छु कि दास जहिले पनि मालिक भन्दा तलकै स्थानमा बस्छ त्यसैले यो स्मारक सही छ। तर शहीद दिवसको अवसरमा मेरो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गर्ने शहीदको सम्मानको लागि त्यो स्मारक उपयुक्त होइन। हो, यो शहीद गेटमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले आएर मालार्पण गर्न सुहाउँछ किनकि यो उनको परिवारका लागि शहीद भएका थिए सर्वसाधारण जनताका लागि होइनन्। मुख्य कुरा त हाम्रो कम्युनिष्ट नेताहरु र उनका विज्ञहरुले बुझाएर सजग गराउन पर्थ्यो। तर शायद दासता सबैलाई प्यारो भएर होला त्यसो हुन नसकेको। आज ती जनताका नेताहरुलाई नै वास्तविक शहीदको सम्मान गर्ने फुर्सत छैन।
Know about 'Mothers' in India